राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागु गर्ने कुरालाई घट्नाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ : सिपी गजुरेल (भिडिओसहित) – Smartkarnalinews
राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागु गर्ने कुरालाई घट्नाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ : सिपी गजुरेल (भिडिओसहित)
मङ्लबार, फाल्गुन ४, २०७७ 5:05:51 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, ४ फागुन । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । तर, त्यसको लागि अहिलेको व्यवस्था नै गलत हो भनेर दलहरुले विचार गर्नुपर्ने सुनाए । उनले भने,‘ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, र, लगत्तै राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नुभयो । यो कदमलाई हामीले प्रतिगमनकारी भनेका छौं । संविधानअनुसार यो अधिकार उहाँलाई छैन् । उहाँले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो । चुनाव हुनेवाला पनि छैन् । चुनाव गराउनको लागि मिति तोकिएको होईन् । हुनेवाला छैन् । उहाँको उद्देश्य चाहीँ के छ भने यो सरकारलाई जसरीपनि लम्ब्याउने हो । शासक बनिरहने ।’
आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागु गर्ने कुरालाई घट्नाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको टिप्पणी गरे । उनले नेकपाले जनतामाथि कुठराघात गरेको पनि बताए । संसद विघटन हुनुको उनले तीन कारण सुनाए । पहिलो कारण, सत्ताधारीभित्रको किचलो, कलह, सत्ता नै भएको उनले सुनाए । उनले भने,‘सत्ताधारीभित्र पद, पैसाको लागि किचलो भयो । अर्को, स्वयम यो व्यवस्थाको कमजोरी पनि कारण हो । ओलीले फाईदा उठाएर यो गरे । कहीँ न कहीँ यो व्यवस्थाको कमजोरी हो । अर्को, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हो ।’
उनले अहिलेको राजनीतकि समस्या÷संकटको समाधान अब संयुक्त वैकल्पिक सरकार बनाएर व्यवस्थाको विकल्प खोज्जनुपर्ने सुनाए । उनले भने,‘समाधानको उपायबारे अहिले बहस चलिरहेको छ, ओलीजीले नयाँ निर्वाचन भनेका छन् । अहिले आएर कांग्रेसका नेताहरुले भाषण गरेका छन्, चुनावको पक्षमा । सभापति देउवाले नै के भन्नुभयो भने उहाँले पूनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभएन । उहाँको जोड चाहीँ आयोगले किन निर्वाचन गर्दैन् ? किन नेकपाको विवाद हल गर्दैन्न् ? भन्ने देखियो । संसदीय दलहरु नै विभाजित देखिए । जसपापनि दुई धारमा देखियो । आँफैमा दलहरु विभाजित छन् । सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ ? अब त्यो अदालतमा गैसकेको छ । हुन त बाहिर के चर्चा छ भने, ओलीजीले सेटिङ मिलाएर गरेकोले उनकै पक्षमा अदालतले फैसला गर्छ भन्ने छ । त्यसो गर्नु गलत हुन्छ । सायद, अदालतले मान्दैन होला ।’
उनले अघि भने,‘कुन फैसला भयो भने देश अघि बढ्छ त ? संसद पूनःस्थापना अथवा निर्वाचन भयो भने संकटको समाधान हुन्छ त ? तर, हाम्रो विचारमा दुवैले समाधान दिँदैन् ।’ सरकारको समिक्षा गर्दापनि नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले तीन वर्षमा केही पनि काम नगरेको र झुटको पुलिन्दा मात्रै बाँडेको टिप्पणी गरेको सुनाए । उनले भने,‘तीन वर्षमा ओलीजीले झुटको पुलिन्दा गर्नुभयो । उहाँहरुले आँफै यो तीन वर्ष काम भएको थिएन भन्नुभएको छ। निर्वाचन नै हुँदैन पहिलो कुरा, भैहाल्यो भने । निर्वाचन पनि एउटा तामाशा मात्रै होला । सामधान दिँदैन् । २०६२÷०६३ मा जनसागर उर्लिएको थियो । अब यो स्थिति पैदा भएको छ, के ओलीको मात्रै असफलता हो ? यो त व्यवस्थापनि असफलता हो।’
उनले आफूहरुले अहिलेको व्यवस्थाको नै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो भनाई के छ भने व्यवस्थाको बारेमा पूर्नविचार गरौं । आन्दोलन अघि बढाऔं । संयुक्त आन्दोलन त्यताबाट गरौं । संसदीय पार्टी नेपाली कांग्रेस त संयुक्त आन्दोलनमा आउन सकेन्। हामीसँग त धेरै अन्तर छन् । बरु, अहिले सिभिल सोसाईटी अघि बढेको छ । अब तेस्रो आन्दोलन आवश्यकत्ता छ भनेर एक जना अभियन्ताले भन्नुभयो । अब अर्को आन्दोलनको आवश्यकत्रा पर्यो । राष्ट्रिय पार्टीहरु, नेताहरुले खुला दिलले सोच्नुपर्यो । त्यही व्यवस्था समातेर कहीँ पुगिँदैन् ।’
भारतको त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाल र श्रीलंकामा पनि सरकार विस्तार गर्ने योजना रहेको भनेर रहस्योद्घान गरेको टिप्पणी गर्दै गजुरेले भने,‘अब कस्तो भयो ? हाम्रो देशमा बिजेपीले सरकार बनाउने अरे । विजेपीले अहिलेसम्म खण्डन पनि गरेको छैन् । विदेशी हस्तक्षेप कहाँ पुग्यो त ? हामीले विकल्प सोचनुपर्नै बेला भयो । हामीले त चार दलको रणनीति संयुक्त मोर्चा बनायौं । आधारभुत विषयमा सहमति भएको छ । यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टामा संघीय जनगणतन्त्र बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक संयुक्त सरकार बनाऔं । बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । राजनीतिक संकटको समाधान वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ४, २०७७ 5:05:51 PM